Baaq ka soo baxay gudidiga fulinta ee barbaarta sitti. – Xeernews24
Baaq ka soo baxay gudidiga fulinta ee barbaarta sitti.
9. Oktober 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Waxaan wada ogsoonahay in aan soo galnay halgan ay dhallinteenu u hurtay naf iyo maalba ilaa qaarkeen jeel ogaadeen loogu ciqaabay si arxan darra ah taas oo sii hurisay kacdoonkii aan ku jirnay ilaa aan ku ridnay nidaamkii kaligii noolaha ahaa ee ina iilay.
Waxaad se moodaa in kadib markii laga xoroobay cadaadiskii ee ay ahayd in aan dhisanno nidaam cadaaladeed uu bilaamay qas iyo fawdo cusub oo la rabo in lagu mija xaabiyo ididiilooyinkii ay bulshadeeno lahayd.
Waxaa xaqiiq jirta ah in mar kasta oo kacdoon(revolution) uu guulaysto uu ka hortago kacdoon lid ku ah(counter revolution) kaas oo ay hogaaminayaan cid kasta oo nidaamkii dumay ku dan qabtay sida ganacsatada,qandaraaslayaasha,siyaasiyiinta, qaraabadii,iyo dhammaan kuwii ka agdhawaa nidaam kaas ee ku dan qabay.
Waxaa xaqiiq jirta ah in qabiil uu qaran noqon karin qabyaaladduna ay tahay basal mar kasta oo la sii diiro kolba qolof hoose loo tagayo meelna aan ku joogsanayn. Kuraastuna ay dadka wada gaadhayn ayse cadaaladda iyo adeegga hufan uu yahay ka kaliya ee na deeqa.
Waxaa la arkay oday kasta oo leh reer kaygii baa laga tagay in uu ku dambeeyo uun wiilkayga ii shaqaalaysiiya inan kasta oo dhallinyar ah oo qabiilka ku hoos dhuumanayina uu ku dambeeyo uun aniga ayaa la iga tagay.taas oo isku qastay muwaadinkii sida daacadda ah xuquuqdiisa uga hadlayay iyo Heegadii shalay oo maanta shaadh qabiil ku gabbanaysa rabtana in ay dumiso xoriyadda aan gaadhnay dibna xilka u hanato.
Haddaba si aan uga baxno jaah wareerkan una jeexno tub cusub oo ifaysa iyo xeedho nawada deeqda waxaa naga talo ah.
1. In aan ka shaqayno wixii namidaynayo kana fogaanno wixii nakala gaynaya
2.in hadii toban walaal ahi xitaa xilka wada qabtaan ay tahay in aan soo dhawayno kulana xisaabtanno hufnaanta adeegooga iyo hawl karnimadooda.
3.in khilaafkeenna aan wada hadal ku xallisano iskana dhaafno ceebaheenaa in aan fbga ku kaga sheekayno.
4.shacabkeenu aad buu u tabaalaysanyahay waxaana haysata waxbarasho la’aan,caafimaad la’aan,biyo la’aan iyo horumar la’aan markaa aan u diirnaxno hooyada foolanaysa ee haysan ambilaas u adeega iyo dhaqtar daaweeya iyo ilmaha da’dii wax barasho macna darrada ku dhaafayso.
5.halka aan kuraasta ku muransannahay aan ku doodno mashruuc hebel dadkeenna ma anfacayo qoshahaasna kanbaa ka fiican.
6.aan ku dadaalno in aan raadsanno xaqeenii federaalka nagaga maqnaa oo hadii aan helno naga kala badan waxase gacmaheena ku jiri meelba nagama tagi doono.
7.hanoo bilaamo tartan ku salaysan aqoon,karti,anshax,habcurin,horumar,isbaddal iyo horu socod.
8.ha noqoto aqoonta iyo diintu midda na hagta halka aan aayaheenna u daba fadhiisan lahayn oday noloshii miyiga ee uu xidfigga ka ahaana ka yimid magaalana waxba ku hayn oo laba dal raacoobay.
9.waxaa la yidhaahdaa siyaasaddu waa fanka suurta galnimada.
saas darteed hadii maanta aan wixii suura gal ah ka shaqayno barri kamaalin waxaan gaadhi doonaa waxii aan suura galka ahayn ee aan naawilaynay
10.masuuliyiinta turkidu waxa ay subax kasta ku ducaystaan:
(Ilaaha xaalka iyo axwaashaba baddaloow xaalkayaga u baddal dhanka roon)
Halka masuuliyiinta carabtu ku ducaysataan(ilaahaw xaal keenna ha baddalin.
11.ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/BAAQ.png 359 500 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-10-09 10:24:332018-10-09 10:24:33Baaq ka soo baxay gudidiga fulinta ee barbaarta sitti.
Fadeexad weyn:Safar Muuse Biixi u bixi lahaa oo la baajiyey+Sababta Turkiga Oo Sii Daayay Muuqaalka Suxufiga Lala’ yahay Ee Jamal Khashoggi Oo...